Shiinaha oo ballan-qaad culus u sameeyey DF Soomaaliya | Arrimaha Bulshada
Home News Shiinaha oo ballan-qaad culus u sameeyey DF Soomaaliya
Shiinaha oo ballan-qaad culus u sameeyey DF Soomaaliya
Bulsha:-Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa maanta kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay danjiraha Shiinaha u fadhiya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, FEI Shengchao.
Kulanka labada mas’uul oo ka dhacay xarunta wasaaradda ayaa waxaa diiradda lagu saraay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaham gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga, la dagaallanka argagixisada, horumarinta, dhaqaalaha iyo arrimaha Gobolka Geeska Afrika.
Sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa sidoo kale kulanka lagu soo qaaday sidii ay dowladda Shiinuhu u bilaabi laheyd mashaariic horumarineed oo laga fulinayo dalka, kuwaas oo qayb ka ah iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya labada dal, si looga dhabeeyo himilooyinka qaran ee labada shacab ee saaxiibbada ah.
Danjiraha Shiinaha oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in ay Soomaaliya u tahay saaxiib istaraatiiji ah, wuxuuna ballan-qaaday inay xoojin doonaan taageerada ay siiyaan.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xarriiqay sida ay dowladdiisa uga go’an tahay sii wadidda taageerada dowlad-dhiska Soomaaliya iyo ixtiraamka midnimada iyo madax-bannaanida.
Ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, ayaa uga mahadceliyey dowladda Shiinaha taageerada iyo kaalinta ay ka qaadato ilaalinta midnimada iyo ixtiraamidda madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka daneeya Soomaaliya, wuxuuna ka fuliyaa mashaariicyo kala duwan, isaga oo sidoo kale ka qayb-qaata arrimaha bani’aadanimada ee dalka.